. Eo ny famoronana raharaham-pitsarana, fa kajy vaovao mety hokotrehina indray ny famerana ny taonan’ny kandida afaka mirotsaka ho 45 ka hatramin’ny 65 taona. Samy tonga ao an-tsain’ny maro avy hatrany, fa tsy ho ao anaty lisitra izany na i Marc Ravalomanana na I Andry Rajoelina, raha sanatria ka tanteraka io. Ny kajy maloto hanesorana ny Ben’ny tanànan’Antananarivo ihany koa efa misoko miadana. Midika izany, fa efa tena misoko mangina hatrany ny fandranitana ady politika lalina eto amin’ity firenena ity. Dia mihevitra ireo mpanao politika goavana hetraketrahiny lava ireo ho malemy sy tsy sahy tokoa ve ny HVM, ka hanao izay danin’ny kibony foana? Mety misy ny zavatra tsy azon’ireo hioarana, fa manana ny teboka mety hahafahany mitroatra ihany ireo, ka hotanteraka ara-bakiteny ny hoe singam-bolo mandavo ny vosotra. Sarotra ho an’ny fanjakana HVM rahateo ny hamantatra ny zavatra kotrehin’ireo mpanao politika lehibe atahorany sy sotasotainy ary hanaovany don-tandroka andro aman’alina ireo. Efa tena manandran-doza ny fanjakana ankehitriny, ary toa tsy tonga ao an-tsainy mihitsy ny hoe mety ho feno ihany ny kapoaka, ka ny fitobahany no mety ho tsy zaka. Maro ihany izay nihevi-tena ho mafy izay, ka dia ho hita eo na ho mafy mandrakizay na hidaraboka sy ratsy fiafara kokoa noho ny efa nisy e!